Dhegayso: Qowmiyadda Oromada ee Boosaso oo digniin cusub soo saaray | KALSHAALE
Dhegayso: Qowmiyadda Oromada ee Boosaso oo digniin cusub soo saaray
Sep 12, 2018 - 9 Aragtiyood
Boosaaso ( Kalshaale) Qaar ka mid ah jaaliyadda Oromada ee ku nool magaalada Boosaaso, ayaa ugu baaqay ehelada dhalinyarada Oromada ah ee gala safarada halista ah ee Tahriibta inay ka joojiyaan dhalinyaradaasi.
Dhinaca kale Haweenka iyo waxgardka ku nool Boosaaso ayaa ku baaqay dhalinyaradaasi in gargaar loo fidiyo, sida uu warbixintan ku sheegayo Wariyaha VOA Yuusuf Maxamed Yuusuf.
horta puntland ma NO MANSLAND baa ,miyaan dawladi ka jirin,,tahriib,budhcad badeed,mooryaan dadka afduubta ,al-shabaab,daacish,al-buura galow,,al-jabhadayn macal qardho kkkkkkkkkk wuxu waa maxay miyaanay dad ahayn ,maxaa mashaakilaad oo dhan isugu keenay meesha kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
WAAR AL-KUFSI baan iloobey kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waxaasi ayay ku nooshahay meeshan la yidhaa Bosaso ama Puntland.Hadii la waayo tahriib,la waayo carab jilbaha la qabsado ama shisheeye lagu soo hogaamiyo Somaliya oo lacag laga qaato,dee meeshani waa lagu kala yaaci.
Waagii uu Somaliya nidaamka dawlaiga ah lahayd dhulkan cidi kuma noolaab jirin.Dadka Somaliya kale ayay u nolol doonaan jireen.Qaarkoodna Ugaadhsato ayay iska ahaayeen.Nidaam la;aanta Somaliya ayay ka dhisantay meeshani.
Waa sidaa awgeed waxa ay Somaliya dawlad ah u necebyihiin.Waxay rabaan Somaliya oo burbursan oo aduunku siiyo caawiwo oo ay iyaguna deeqahaasi dhuuqaan,dilaal ka noqdaan dadka Somaliya boobaya ama baabiinaya.
Waar toos maxaa kugu dhacay.
Ciise bin Ahmed
Meesha keliya oo uga baqo in Oromo toos ula wareegto waa Somaliland siiba Hargeysa, 3 jeer ka badan kuwa jooga Puntland.
Markay doonaan soo gala kana tahriiba.
Iskuma jeedaa islaanka laayey.
Hadaa ma Galguguud ayaa rainforest ah, daanyeer Habargidir oo waalan baa tahay.
Iidoorka dalka kala jaraya iyo mooryaanta timahooda dhinacna u xiirmayn hadday Somalida fiican yihiin, Somali ilaah ha naxariisto.
Waa ragii kuu talin jiray markaad qaawanayd.
Waxaad moodaa in qabiil horumar ku gaaridootid, weligaa cabaad, gunyahay.
Bal inaad xoolo tahay ma isweydiisay sababta Oromo, Eelay, Jareer iyo ugu soo ordayaan in dhulkii aad barwaaqada aad ku sheegeysay laga soo cararay, muxuu dhilqaha/kutaanta uga soo guureen oo Jowhar yaanyo Bossaso usoo dhoofiso,
Daanyeer been kunool anagaa hadda kadib runta kuusheegayna, tukulushka meesha looga soo cararay waxa yihiin oo parafasoor Talxa mooskii Afgooye ka doonan waayey.
Dhulkii waa qarax lama degaan ah iyo in dadkii degenaa looga batay oo in Xanar jareerweyne ah iyo Raxanweyn harin macal iyo Isaaq!
Qof Majeerteen ah dukaan kuma laha Hargeysa Isaaqa xaafad dhan degaan Bossaso iyo Garoowe ganacsi weyn ku leeyihiin.
Bal isqabsii waa loosoo yaacin iyo waa qarax, weliba marka kaluunka iyo macdanta iyo ganacsiga xoolaha sifiican furmo Xamar tuulo noqon adna meel kale ka hadlin.
20 sano isii, daanyeer aqli xun oo dhulkii Somalia barkiis ogeyn waxa ka jira.
Ma isweydiisay sababta Gaas baarqab u yahay
Anaa kuu sheegaya waxa baarqab u yahay, dal iyo dad adeecsan ayuu haystaa, waa intaa waxa ku dhaafay kuwa xukuma dad aqli baranbaro leh.
In aadan magaaloyinka waa weyn. Aadan wax ganacsi ah ku yeelan. Wexey muujineysaa laangaabnimo. Gaalkacyo ilaa bosaaso waan maray. Markaad saacad socoto ayaad arkeysaa tuulo yar. War ninyohoow Dhul iyo dad ayaa iskaga kaa darsamay.
Markaad laascanood ka dhaqaaqdo ilaa wajaale meel banaan arki meysid. Markaad gaalkacyo ilaa kismaayo aado waaba ka daran tahay.
Nin kufanaayo laandheere ayaan ahay hadana caasimadii labaad wax ganacsi ah ku lihi. Waa nin qurbuhu wax u dhimay
Walahay intaad aad sheegtayba waa run..anigu ma marin oo burco dhankaas uma dhaafin laakiin dad fara badan baan ka maqlay hadaalkaa aad hadeer Land Of Punt u sheegtay…xataa dad qaraabo ah ba ai sheegay walahay.
Hargeisa Majeerteen ma dago laakiin ISAAQ baa boosaso dega waa hadal jnan gumeed sxb ee inagaadaa faanka kkkk 900 oo arday ah baaa jooga arlada Somaliland Borama, Hargeisa & Burco.
Kuwaasi malaha DHABAYCO mahaa!! Inaad faantaa waa sahaala oo way fududahay laakiin waa inaad wixii caqliga gala ee macquula ah kufaantaa!!